वृद्ध शेल्फ कर्पोरेसनहरू स्थापना गरिएको क्रेडिटको साथ
कानुनले भन्छ कि निगम एक कानूनी "व्यक्ति" हो यसको मालिकहरुबाट अलग छ। मालिकहरूको उमेर कम्पनीको उमेरसँग आवश्यक छैन। जब एचजे हाइन्ज कम्पनीले विज्ञापन गर्दछ कि यो 1869 मा स्थापित भएको हो, यसको मतलब यो होइन कि सबै सेयर होल्डरहरू 100 वर्ष पुरानो भन्दा राम्रो छन्। यसको सीधा अर्थ यो हो कि कम्पनीले त्यो बर्ष दायर गरेको थियो। तपाईं उस्तै उर्जा सुविधाहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ ग्राहकहरूलाई विज्ञापन गर्दा।
तपाईंको कम्पनीको उमेरले ग्राहकहरू र ndणदाताहरूलाई हालसालै स्थापित भएको व्यापार भन्दा बढि विश्वसनीयता दिन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईंको व्यवसायमा भएको समयको लम्बाई तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको कम्पनीको उमेर बराबर हो। उदाहरण को लागी, मानौं तपाईं 12 बर्ष देखि प्लम्बिंग क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तपाईंको वकील र लेखाकार सिफारिश कि तपाईं दायित्व सुरक्षा र कर बचत को लागी समावेश गर्नु पर्छ। त्यसोभए, तपाइँले 12 वर्ष पुरानो निगम प्राप्त गर्नुभयो जुन तपाइँ व्यापारमा भएको समयको अनुरूप हुन्छ। यस तरिकाले, जब तपाईं विज्ञापन गर्नुहुन्छ कि तपाईं दर्जनौं बर्ष व्यवसायमा हुनुहुन्छ, यदि सम्भावित ग्राहकले तपाईंलाई कम्पनीमा हेर्छ भने, तिनीहरूले देख्नेछन् कि तपाईंको कर्पोरेशन फाइल गर्ने मिति तपाईंले वास्तवमै व्यवसाय गरेको समयको अनुरूप हुनेछ।
त्यस्तै, स्थापित कम्पनी र अवस्थित क्रेडिट लाइनहरूको साथसाथै तपाईंको कम्पनीमा buildingण निर्माणको साथ कम्पनीहरू र अन्य सक्रिय व्यवसायहरू प्राप्त गर्दा व्यवसायलाई ठूलो आर्थिक बृद्धि दिन सक्छ। यो नोट गर्न जिम्मेवार छ कि उमेर निश्चित रूपमा उधारो र व्यापार विश्वसनीयता मा मात्र कारक होईन र हामी तपाईंलाई पुरानो कम्पनी अधिग्रहण गरेको मिति को रूपमा पूर्ण खुलासा सिफारिस गर्दछौं।
हामीसँग धेरै किफायती कार्यक्रमहरू छन् जुन छिटै ब्यापार क्रेडिट प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
यस दिन र उमेरका संगठनहरूदेखि सावधान रहनुहोस् जसले भन्छ कि तपाईं एक कम्पनी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जुनसँग पहिले नै क्रेडिट लाइनहरू संलग्न छ। यदि तपाईं एक वृद्ध कम्पनी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, हामीलाई कल दिनुहोस्। तपाईंले यो प्राप्त गरे पछि हामी तपाईंलाई यसको लागि क्रेडिट बनाउन मद्दत गर्न सक्दछौं।
कम्पनी समावेशी यस्तो धेरै निगम र LLCs प्रदान गर्दछ। त्यहाँ धेरै पुरानो शेल्फ नेवाडा कर्पोरेसनहरू, डेलावेयर कर्पोरेसनहरू, वायोमिंग कर्पोरेसनहरू, अपतटीय / अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेसनहरू र क्यानेडाली निगमहरू उपलब्ध छन्। सब भन्दा मूल्यवान कम्पनीहरु छिटो प्राप्त गर्न र व्यवसाय निर्माण गर्न को लागी शेल्फ कर्पोरेशनहरू हुन सक्छन्। कम्पनीहरू यस देशमा अवस्थित छन् जुन पहिले नै कर्पोरेट क्रेडिट स्कोरहरू छन् र ndणदाताहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्छन्, यद्यपि यी कम्पनीहरू प्राय: सक्रिय अपरेटिंग निकायहरू हुन्।
कम्पनीहरु निगमितको एउटा विशेष प्याकेज छ जसमा बुढेसुकको शेल्फ कम्पनी र एक प्रोग्राम समावेश हुन्छ जहाँ हामी डन एण्ड ब्राडस्ट्रिट र अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सीहरूको साथ कर्पोरेट क्रेडिट स्कोर निर्माण गर्दछौं। हामी leणदाताहरूसँग सम्पर्क व्यवस्थित गर्न सक्दछौं जसले अनुमोदन पछि, व्यवसाय विस्तार, ब्यापार आपूर्ति, र घर जग्गा खरीदहरूको लागि क्रेडिट व्यवस्था गर्न मद्दत गर्दछ।
अर्को प्रोग्राम उपलब्ध छ रियल ईस्टेट प्रशिक्षण, परामर्श र एक पूरक क्रेडिट निर्माण कार्यक्रम हो। हामी एक अनुभवी घर जग्गा लगानी विशेषज्ञको लागि व्यवस्था गर्छौं जसले दुई तीन दिनको लागि तपाईंको गृह शहरमा आउन र गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान गर्न $ 1 मिलियन भन्दा बढी कमाई गरेको छ। यसमा सम्पत्तीहरूको विश्लेषण, गुणहरूमा प्रस्तावहरू, यदि उपयुक्त लगानी उपलब्ध छ, र लेनदेनको लागि सम्भव भएसम्म थोरै पैसाको लागि सम्पत्ति कसरी फाइनेंस गर्ने भनेर देखाउँदै समावेश गर्दछ।
यस पृष्ठको अघिल्लो शीर्षक, स्थापित क्रेडिट र अवस्थित क्रेडिट लाइनहरूको साथ वृद्ध शेल्फ कर्पोरेसनहरूको सन्दर्भमा एसईओ उद्देश्यको लागि राखिएको थियो किनभने हाम्रो अनुसन्धानले संकेत गर्‍यो कि त्यहाँ त्यो शब्दको लागि असंख्य खोजहरू थिए। हामीले भर्खरको शीर्षक परिवर्तन गर्‍यौं पृष्ठको विषयलाई निकटतासँग प्रतिबिम्बित गर्न। नोट: तल छलफल गरिएको कार्यक्रम अब उपलब्ध छैन र केवल सन्दर्भको लागि हो।
क्रेडिट सहायता प्याकेजको साथ हाम्रो वृद्ध कम्पनीले निम्न वस्तुहरू समावेश गर्दछ:
रियल इस्टेट को लागी क्रेडिट प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहोस्, सामान्यतया $ 1 मिलियन अधिकतम - तपाईंले एक निगम वा LLC प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं रकम को लागी घर जग्गा खरीद प्रस्ताव बुझाउनुहोस्। तपाईं, loanण स्वीकृतिको अधीनमा, एक aण संस्था द्वारा घर जग्गा पहिलो धितो लागि सुरक्षित क्रेडिट मा 1 मिलियन सम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै, हामीसँग धेरै अतिरिक्त निजी ndणदाताहरूसँग सम्बन्ध छ जो कर्पोरेसनहरू साथै व्यक्तिहरूलाई ndण ​​दिन इच्छुक छन्। स्वाभाविक रूपले, nderणदाताले पहिले प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि सम्पत्ति मूल्यले loanण रकमलाई समर्थन गर्दछ र transactionण सुरक्षित छ कि प्रत्येक लेनदेन कोष को लागी अघि approvedण लिने अनुमोदित कोठा मार्फत सुरक्षित छ। कुनै पनि व्यावहारिक व्यक्तिले बुझ्ने छ, एक कर्पोरेसन वा LLC भएको, आफैंमा, एक वित्तीय संस्था मा हिंड्न र डलर बिल संग वर्षा गर्न सक्षम छैन। त्यसोभए, हाम्रा प्रशिक्षकहरूले केवल तपाईंलाई कसरी रियल ईस्टेटमा लगानी गर्ने र कसरी तपाईंको कम्पनीको नाममा सम्पत्तीको स्वामित्व लिने भनेर सिकाउँछन्। हाम्रो नेटवर्क र हाम्रो सहयोगीहरु लाई ग्राहकहरु लाई को लागी लाखौं डलर को व्यवस्था छ। हामी धितो ब्रोकरहरू होइनौं, त्यसैले हामी loansणमा कमिसन कमाउँदैनौं। हामी केवल loansण व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछौं र तपाईंलाई उचित ndणदाताहरू सन्दर्भ गर्दछौं। तथापि, प्राकृतिक रूपमा त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टी छैन कि कुनै पनि खासान्तर ट्रान्सेक्शन फन्ड हुनेछ। क्रेडिटको वितरण (णदाता (ओं) द्वारा SAण सुरक्षा को अनुमोदन गर्न को लागी विषय हो।
एक-मा-एक प्रशिक्षण - हामी तपाईंलाई एक विशेषज्ञ पठाउछौं जसले तपाईंलाई प्रशिक्षण दिन तपाईंको शहरमा real 1,000,000 भन्दा बढी रियल ईस्टेटमा कमाएको छ कसरी घर जग्गा क्रेडिट प्राप्त गर्ने र कसरी तपाईंको फिर्ती अधिकतम गर्ने अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्दा। यो दुई दुई दिनको प्रशिक्षण हो। यो कक्षा कोठा प्रशिक्षण होइन। यो व्यक्तिगत 1-on1 ह्यान्ड्स अन, तपाईंको शहरमा आमने सामने प्रशिक्षण हो। प्रशिक्षक तपाइँसँग सम्पत्ती खोज्नेछ, तपाइँलाई कसरी सँगै पेश गर्ने भन्ने कुरा देखाउँदछ, सामान्यतया तपाइँको जेबबाट थोरै पैसा खर्च नगरी, र कसरी रियल ईस्टेटमा अधिक पैसा लगानी गर्ने भनेर। समावेशी कम्पनीहरु को प्रबंधन 1994 पछि यो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान गरीरहेको छ। हामी विश्वास गर्छौं कि प्रत्येक ग्राहकको बारे जसले एकल प्रशिक्षण प्रशिक्षणमा भाग लिएको छ अत्यन्त संतुष्ट भएको छ। चाहे तपाई नयाँ वा अनुभवी घर जग्गा लगानीकर्ता हो, हामी विश्वास गर्दछौं तपाई यस एकल एक प्रशिक्षणबाट धेरै सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। तपाईंले प्रशिक्षकको यात्रा शुल्कहरू कभर गर्नुहुनेछ। यसको कारण यो हो कि ट्रेनरले सडक पार गर्न आवश्यक छ वा देश भरको यात्रा गर्नुपर्दछ, हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि तपाईसँग न्यूनतम खर्च छ र सबैको लागी लागत अंकित गर्न चाहनुहुन्न किनकि यात्रा लागत फरक हुन्छ। सामान्य लागत राउन्ड ट्रिप टिकटको लागि छ सय र होटल र खानाको लागि दिनको दुई सय हुन सक्छ। त्यसोभए, लागत एकदम न्यून छ।
गैर-घर जग्गा खरीदहरूको लागि अतिरिक्त क्रेडिट लाइनहरू - एक कर्पोरेट क्रेडिट बिल्डर कोच, जो तपाईं संग तपाईंको कर्पोरेट क्रेडिट रिपोर्ट निर्माण गर्न को लागी, संरचित कार्यक्रम सहित र टोल फ्री समर्थन लाइन सहित काम गर्नेछ। तपाईंको कोच हामी तपाईंसँग काम गर्नेछौं ताकि तपाईं आफ्नो आवश्यकताहरूको लागि थप क्रेडिट प्रयोग र निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ र प्रक्रियामा तपाईंको उचित सहभागिताको लागि डन एण्ड ब्राडस्ट्रिट क्रेडिट स्कोर प्राप्त गर्नुहोस्।
हाम्रो उपलब्ध सूची हेर्नुहोस् वृद्ध कम्पनीहरू यहाँ।
Theणदाताले loanण सुरक्षित गर्ने सम्पत्तीको मूल्य प्रमाणीकरण गरेपछि, र मानक underणरेखा प्रक्रिया र पर्याप्त safetyण सुरक्षा मार्फत लेनदेनको अनुमोदन गरे पछि, N 1 मिलियन डलरसम्म रियल ईस्टेट खरीदको लागि एक सम्झौताको आधारमा एस्क्रोमा तार गरिनेछ वा अन्य सुरक्षित वस्तुहरू। फेरि, यो ग्यारेन्टी छैन। Aणदाताले कुनै खास लेनदेनको लागि सहमति गरे पछि मात्र कोषहरू वितरित हुन्छन्।
क्रेडिट ब्यापार व्यावासायिक उपकरण, मोटर वाहन र अन्य आइटमका लागि पनि उपलब्ध छ जुन तपाईंको आवश्यकताको लागि टेलर बनाउन सकिन्छ, nderणदाता स्वीकृतिको अधीनमा, यो कर्पोरेट क्रेडिट कोचिंग प्रोग्रामको एक हिस्साको रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
घर जग्गा वित्त पोषण आवासीय, व्यावसायिक, जग्गा वा अन्य घर जग्गाको साथै अन्य सुरक्षित सम्पत्ति वा उपकरणहरूको लागि उपलब्ध छ।
तपाईंको ट्रेनरले तपाईंलाई कर्पोरेट क्रेडिट प्रयोग गरेर सम्पत्ति खरीद गर्नको लागि स्वीकार्य प्रस्तावहरू कसरी तयार गर्ने भनेर देखाउनेछ। प्रशिक्षकले तपाईंलाई अफरहरू कसरी तयार गर्ने भनेर पनि देखाउँदछ जुन नगद भुक्तानी आवश्यक पर्दैन।
के कर्पोरेसन वा LLC सँग एक डन एण्ड ब्रैडस्ट्रिट (D&B) नम्बर र "Paydex®" स्कोर हुनेछ?
हो एडी र बी नम्बर, पेडेक्स स्कोर र कर्पोरेट क्रेडिट निर्माण कार्यक्रमको लागि सबमिशन अतिरिक्त क्रेडिट लाइन समर्थन कार्यक्रमको अंश हो। तपाईंलाई एक कर्पोरेट क्रेडिट कोच नियुक्त गरिनेछ जो क्रेडिट निर्माण कार्यक्रममा बहुमत काम गर्दछ।
के म चाहेको कुनै पनि हिसाबले फन्ड प्रयोग गर्न सक्छु?
यो तपाईं के चाहानुहुन्छ निर्भर गर्दछ। यदि लेनदेन तपाईं र theणदाता दुबै को लागी व्यापार को अर्थ बनाउँछ र उचित सुरक्षा मापदण्डहरु मा हो, हो। यो रियल ईस्टेट वा कर्पोरेसन वा LLC लाई भुक्तानी गरिएको वस्तुहरू किन्नको लागि एस्क्रोमा पैसा approvalणदाताको अनुमोदनको विषय हो, जसबाट तपाईं अन्य वस्तुहरू खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। Leणदाता उत्तम लचिलोपन छ तर कुनै सफल nderणदाता अन्धाधुन्द आफ्नो खाता मा एक लाख डलर तार गर्न को लागी पहिले तपाईको अन्य loanण-सुरक्षा प्यारामीटर्स को विश्लेषणको अलावा secureण सुरक्षित गर्न को लागी पर्याप्त मूल्य छ सुनिश्चित गर्न को लागी एक नजर लिए बिना। सबै वा लगभग सबै क्लाइन्टहरू जसले एक-एक-एक प्रशिक्षणमा सिकाईएको निर्देशनहरू पालना गर्छन् र सल्लाहहरूको पालना गरेमा केही प्रकारका फाइनान्स प्राप्त गर्न सक्षम भएका छन्।
के म मेरो आफ्नै व्यक्तिगत क्रेडिट प्रयोग नगरीकन पैसा उधार लिन सक्छु?
हो घर जग्गाको लागि सुरक्षित क्रेडिट परम्परागत रूपमा 100% कर्पोरेट क्रेडिटसँग व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरको पर्वाह नगरी उपलब्ध छ, nderणदाता आवश्यकताहरूको आधारमा। वैकल्पिक रूपमा, अण्डरराइटरसँग तपाईं कम्पनीको शक्ति आफैंको साथ मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईंको उधारो शक्ति बढाउनको लागि। स्वाभाविक रूपमा, यो theणदातालाई ofणको सुरक्षाको विषय हो। हालसालै, धेरै ndणदाताहरूले व्यवसाय क्रेडिट बाहेक अन्य प्यारामिटरहरू हेर्दैछन्। त्यसो भए यो theणदातामा निर्भर गर्दछ।
आजको तंग क्रेडिट बजारसँग तपाईं कसरी यो काम गर्न सक्नुहुन्छ?
हामीसँग ndणदाताहरू छन्, जसले धेरै वर्षदेखि निजी लगानीकर्ताहरूको नेटवर्क बनाएका छन् जसले घर जग्गा धितोमा पैसा लगानी गर्छन्। त्यसोभए, बैंकहरूसँग काम गर्नुको सट्टा हाम्रो ndणदाताहरूले यसको निजी लगानीकर्ताहरूको विशाल नेटवर्कबाट क्रेडिट वितरणमा फन्ड गर्छन्। फेरि, हामी loansण व्यवस्था गर्न र ndणदाताहरूलाई मात्र तपाईंको सेवाको रूपमा सन्दर्भ गर्न मद्दत गर्दछौं। हामीले loansणबाट कमिसनहरू प्राप्त गर्दैनौं।
के म कर्पोरेसन क्रेडिट प्रयोग गर्न सक्छु निगम वा LLC, क्रेडिट प्रोग्राम वा तपाईंबाट घर जग्गा प्रशिक्षण खरीद गर्न?
होइन। तपाईंले निगम वा LLC, क्रेडिट बिल्डर र / वा प्रशिक्षण कार्यक्रम तपाईंको आफ्नै कोषबाट खरीद गर्नु पर्छ।
के म मेरो जेबमा केही नगदी राख्न सक्छु?
घर जग्गा कारोबारलाई संरचना गर्ने त्यहाँ उपायहरू छन् कि जब सम्पत्ति लेनदेन बन्द हुन्छ, तपाईं सम्पत्ति खरीदबाट जेबमा नगद फिर्ता प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, यद्यपि यो ग्यारेन्टी छैन। प्रयोग विधिहरू पाठ्यक्रम कोर्स मा सिकाईनेछ।
कसले loansण र घर जग्गा वा अन्य खरीदहरूको अनुमोदन गर्छ?
प्रशिक्षण कोर्सले तपाईंलाई कसरी स्वीकार्य प्रस्तावहरू र nderणदाताले वित्तीय लेनदेनको अनुमोदन गर्ने देखाउँदछ।
के तपाइँ मेरो लागि घर जग्गा लगानीहरू प्रदान गर्नुहुन्छ जुन म कर्पोरेट क्रेडिट प्रयोग गरेर खरीद गर्न सक्छु?
जहाँ तपाईं रियल ईस्टेटको कुनै स्वीकार्य टुक्रा खरीद गर्न फन्डहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ कोर्सका प्रशिक्षकले पूर्व-जाँच गरेका लगानीहरू प्रायः उपलब्ध हुन्छन्। यो सुविधाको रूपमा मात्र हो र, तपाईंलाई यी सम्पत्तिहरू खरीद गर्न आवश्यक छैन। तपाईले कोषमा प्रस्ताव गरिएको भन्दा टाढा फेला परेका अन्य सम्पत्तिहरू खरीद गर्न कोष प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
म कस्तो प्रकारको घर जग्गा किन्न सक्छु?
आवासीय, एकल परिवार, बहु-परिवार, वाणिज्यिक, फोरक्लोजरहरू, कच्चा जग्गा, एकल परिवार, फोरक्लोजरहरू, घटनाक्रमहरू, पुनर्वासहरू सम्बद्ध सामग्री र श्रम लागत सहित। विवरण प्रशिक्षण कोर्स मा सिकाइएको छ।
के म मेरो जेबबाट नगद लिई 100% वित्त पोषण प्राप्त गर्न सक्छु?
हो विधिहरू जुन 100% वित्तिय संरचना गरिएको छ प्रशिक्षण पाठ्यक्रममा सिकाइन्छ। अन्य विधिहरू सिकाइन्छ जहाँ तल भुक्तान आवश्यक छ, कि त तपाईं वा तपाईंको सहयोगीहरू मध्येबाट।
के म अझै $ 1 मिलियन क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्दछु?
हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिकतम $ 1 मिलियनको लागि हो, रियल ईस्टेट र nderणदाता underणदातालेखन प्रक्रियाहरूको मूल्यको समीक्षाको अधीनमा। प्रशिक्षण पछ्याएर तपाईं कसरी increaseण लिन सकिन्छ कि रकम बढाउन जान्न सक्नुहुन्छ।
यो उस्तै जवाफ हो यदि कसैले तपाईंलाई सोध्थ्यो भने, "कारले कति खर्च गर्छ?" यो निर्भर गर्दछ। यो मार्केट ब्याज दर र ऋण को जोखिम मा निर्भर गर्दछ। यस लेखको रूपमा, कम-जोखिम ऋण, जहाँ निगम वा LLCले तपाईंलाई घर खरीद गर्न मद्दत पुर्याउनेछ, जहाँ तपाई अवस्थित हुनेछ, ब्याज दरहरू 5-8% हो। मध्यम जोखिम ऋण, जस्तै छोटो-समय पुनर्निर्माण वित्त हो 9-12%। उच्च जोखिम ऋण तेरहवास बीस-4 प्रतिशत हुन सक्छ। खतरनाक क्षेत्र नजिकका गुणहरू वा उच्च जोखिम छोटो-निर्माण निर्माणको लागि उच्च जोखिम हुन सक्छ। यसले राज्यमा पनि निर्भर गर्दछ जुन सम्पत्ति सुरक्षित राखिएको छ किनकि विभिन्न राज्यमा विभिन्न ब्याज दर आवश्यकताहरू छन्। माथिको संख्या उदाहरणहरू हुन्। समय र अन्य कारकहरूसँग ब्याज दर भिन्नताहरूको कारण हामी भविष्यमा चार्ज हुने हाम्रो ऋणदाताले ब्याज दरमा प्रतिज्ञाहरू गर्दैनौं।
के म अब आफैं आफैंको रिफाइनेंस गुणहरूमा क्रेडिट प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, यो उपलब्ध छ।
के मैले पहिले नै स्वामित्व गरेको एक निगम वा LLC मा क्रेडिट निर्माण गर्न सक्छु?
हो, हामी एक कार्यक्रम को प्रस्ताव गर्दछ जहाँ यो सम्भव छ तर यो भन्दा धेरै लामो हुनेछ र एक मौजूदा निगम वा क्रेडिट लाइन संग LLC खरीद को बारे मा नै लागत हुनेछ।
के तपाइँ प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ कि अन्य ग्राहकको निगमहरू वा LLCहरू क्रेडिटको लागि अनुमोदित गरिएको छ?
हो। यो साबित हुन सक्छ कि उधारदाता ग्राहकहरु लाई धेरै सय ऋण वितरण गरिएको छ। हामीले उधार संस्थाहरू बाट अक्षरहरू प्राप्त गरेका छौं जुन अचल सम्पत्तिको प्रस्ताव प्रस्तावहरूमा क्रेडिट विषय स्वीकृत भएको छ जुन तिनीहरूको रेखाचित्र प्रक्रियाहरू पारित गर्दछ। ऋणदाता र निधि स्रोतहरूको यसको सञ्जालले उपयुक्त दरहरू प्राप्त गर्न काम गर्नेछ। यद्यपि राशि स्थापित गरिएको छ, स्वाभाविक रूपमा, ऋणदाता निश्चित हुन आवश्यक छ कि सम्पत्ति मूल्य ऋणको समर्थन गर्नेछ र ऋण ऋणदाताको लागि सुरक्षित छ।
के तपाइँसँग अन्य ग्राहकहरू छन् जसले यो सफलतापूर्वक गरेका छन्?
हो। स्पोकेन मा हाम्रो ग्राहकहरु मध्ये एक, वाशिंगटन कुनै पनि चीज संग शुरू गरे र हामिलाई भन्यो कि उनले प्रशिक्षण को पालन गरेर एक $6मिलियन मूल्य को निर्माण गरे। फ्लोरिडामा दुई अन्य क्लाइन्टले संकेत गरे कि तिनीहरूले पहिलो दुई महिना भित्र व्यापारिक उपकरणमा $ 450,000 खरिद गरे। अर्को ग्राहक एक पुलिस अधिकारी हुनुहुन्थ्यो र अचल सम्पत्ति लगानीकर्ता बन्नुभयो। अर्को क्लाइन्टले आफ्नो अंशकालिक थियो भन्दा कम समयको अचल सम्पत्ति लगानी गतिविधिमा कमायो। प्राकृतिक रूपमा, नतिजा भिन्न हुन्छन्। यदि तपाइँले गर्नुभयो भने यो कार्यक्रम मात्र काम गर्नेछ ... र प्रशिक्षण पछ्याउनेछ।
कुन प्रतिशत मानिस सफल छन्?
हामी एक कोर्स प्रशिक्षकहरु द्वारा बोलाइएको छ कि क्लाइन्ट प्रोग्राम्स मार्फत ग्राहकहरु को 87.3% एक या एकाधिक अचल सम्पत्ति लेनदेन मा लगी हो। केही बाँकी व्यक्तिहरू या त काम अधिग्रहण गर्ने प्रक्रियामा छन् वा पाठ्यक्रममा सिकाइएका आवश्यक प्रयासहरू नलिईएको छ।
के म तिमीलाई भरोसा गर्न सक्छु?
हो। हामीले 1906 मा व्यापार गरिरहनुभएको छ र तपाईंको सफलताको पूर्ण प्रतिबद्धता छ। हामीसँग तीनवटा कारणका लागि सफल हुनका लागि हामी एक बलियो प्रोत्साहन छौँ। 1। हाम्रो ग्राहकहरूको हेरचाह गर्ने सही कुरा हो। 2। यसले हाम्रो लागि व्यावसायिक अर्थ बनाउँछ किनकी हाम्रो व्यापार को अधिकांश ग्राहकहरु को मुँह रेफरल को माध्यम ले खुश ग्राहकहरु को माध्यम ले छ। 3। जब तपाईं खुसी हुनुहुन्छ भने तपाइँलाई दोहोरो दोहोरो ग्राहक हुन सम्भव हुनेछ। हाम्रो लक्ष्य आफ्नो आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न र तपाईं संग लामो-सम्बन्ध सम्बन्ध छ। यही कारणले हामी पूर्णतया खुलासा गर्दछौं कि हाम्रो लेनदेन प्रत्येक लेनदेन को प्रत्येक लेनदेन को अनुमोदन गर्दछ र हामी कुनै पनि लेनदेन को वित्तपोषण को गारंटी नहीं गर्छन।
अवस्थित ग्राहकको वास्तविक उदाहरण
कृपया हाम्रो वास्तविक ग्राहकको लागि कसरी एक क्लिक गर्नुहोस् हाम्रो ग्राहकहरु मध्ये कुनै एक को उपयोग को क्रेडिट संग शेल्फ कारपोरेट र / वा नव निर्मित कम्पनीहरूले आफ्नो पहिलो लेनदेनको लाभमा $ 300,000 भन्दा बढी कमाउनका लागि।
मैले कम्पनीसँग सम्बद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमबाट के सिक्न सक्छु?
शेल्फ कर्प क्रेडिट क्रडिट कोर्सको साथ
के तपाईं अवस्थित ग्राहकहरूको प्रशंसा गर्नुहुन्छ?
हो, कृपया तल भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले वास्तविक विद्यार्थी (हरू) देख्नुहुनेछ जसले क्रेडिट कार्यक्रम र पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको विद्यार्थीहरू प्रयोग गर्दछन्। यो उही भिडियो हो जुन तपाईंले माथिको लिङ्क क्लिक गरेर प्रशंसापत्र सेक्शनलाई स्क्रोल गरेर देख्न सक्नुहुनेछ।
म एक विशेष सम्पत्ति छ कि म खरीद गर्न चाहन्छु। के तपाईंको कार्यक्रमले यसको लागि काम गर्नेछ?
कुनै पनि अचल सम्पत्ति लेनदेन बारे यो कार्यक्रमको माध्यमबाट वित्त पोषण गर्न सकिन्छ यदि ऋण समर्थन गर्न पर्याप्त सुरक्षा छ र यो ऋणदाताको आवश्यकताहरु पूरा गर्दछ। तथापि, अचल सम्पत्ति लगानीकर्ताले सबै भन्दा ठूलो गल्ती गर्न सक्दछ, तथापि, एक सम्पत्तिको साथ प्रेममा पतन हुन्छ। धेरै भन्दा सफल अचल सम्पत्ति लगानीकर्ताहरूले हरेक हप्ता धेरै प्रस्तावहरू गर्छन्।
हाम्रो प्रोग्रामले के गर्न सक्छ भने तपाइँलाई दिमागमा भएका सौदाहरू छन् भने तपाइँलाई बताउन वा तपाईंको फाइदा छैन। धेरै अनुभवी सल्लाहकार जसले प्रोग्रामको साथ आउँछ तपाईंलाई राम्रो अचल सम्पत्ति लेनदेनको राम्रो तरिकाले क्रमबद्ध गर्न मद्दत गर्नेछ। यसबाहेक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमले तपाईंलाई बताउनेछ कि सबैभन्दा लाभदायक लेनदेन कहाँ छ र तपाईंको प्रस्तावहरू कसरी ठीकसँग ढाँचा बनाउँदछ।
धेरै अनुभवी र धेरै नयाँ ग्राहकहरु लगातार भन्छन् कि उनि प्रशिक्षण र परामर्श देखि भारी लाभ उठाउँछन्। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाइँ डीभिडी ट्रेनिंग कोर्सहरू हेर्नुहुन्छ वा तपाईंको परामर्श समय प्रयोग गर्नु भन्दा प्रत्यक्ष पाठ्यक्रमहरूमा भाग लिनुहोस् ताकि तपाईं र तपाइँको सल्लाहकार एउटै पेजमा हुनेछ।
यस र एक क्रेडिट को पारंपरिक रेखा को बीच यस अंतर को रूप मा निम्नानुसार छ: क्रेडिट को एक पारंपरिक लाइन संग एक मूल्यांकन र ऋण सुरक्षा विश्लेषण क्रेडिट को लाइन लाई दिइएको छ पहिले देखि गरिन्छ। तथापि, यस कार्यक्रमको साथमा, जब सशर्त क्रेडिट पेश गर्नुभएपछि सम्पत्ति ऋणदातालाई प्रस्तुत गरिएको छ, पछि मूल्याङ्कन र ऋण सुरक्षा विश्लेषण पछि सम्पन्न हुन्छ र उपलब्ध क्रेडिटको अंश विशेष परियोजनामा ​​आवंटित गरिन्छ यदि वा ऋण सुरक्षा विश्लेषण ऋणदाताको लागि अनुकूल छ।
के मेरो व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर समावेश हुनेछ?
तपाईंको व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर जरूरी अनुमोदन प्रक्रियाको भाग होइन। यदि लिखित लेखक यसको लागि सोध्न सक्दछ भने, यो ऋण योग्यता उद्देश्यको लागि यो हुन सक्छ वा हुन सक्छ जुन निगम वा LLC नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिको सत्यता प्रमाणित गर्न हो। अर्को शब्दमा, यदि निगम वा LLC को अध्यक्ष या प्रबन्धकले खराब क्रेडिटमा यो ऋणदाता आवश्यकताहरु को आधारमा ऋण अनुमोदन को लागी जरूरी असर गर्दैन। यद्यपि, यदि निगम वा LLC नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिले धोखाधडी गतिविधिको निरन्तर ढाँचा छ जुन परिणामस्वरूप क्रेडिट प्रतिवेदनमा धोखाधडीको निर्णय भएको छ भने यो सम्भवतः ईमानदारीको कुरा हुनेछ। त्यसकारण, ऋणदाताको आवश्यकताहरूको आधारमा खराब व्यक्तिगत क्रेडिट हुनसक्छ वा हुनसक्छ, हुन सक्छ, तर ईमानदारीको आबादीको कारणले गर्दा। भर्खरैका समयमा उधारदायीहरूले भर्खरै गरेको हालको तुलनामा निगमको मालिकको व्यक्तिगत क्रेडिटको बारेमा थप चिन्तित छन्।
लेनदेन को वित्तपोषण को लागी कब सम्म लाग्छ?
ऋणदाताको चाँडै पछि सन्तुष्ट हुन्छ कि पर्याप्त ऋण सुरक्षा छ र ऋणदाता लेनदेन कोषमा इच्छुक छ। हामी ऋण बन्द गर्ने बेलामा प्रतिज्ञाहरू गर्दैनौं, तथापि, ऋणहरूले पारंपरिक उधारदाताओं भन्दा छिटो बन्द गर्छ। ऋणदाता सुरक्षाको लागि लेनदेन को विश्लेषण गर्न आवश्यक समय आवश्यक छ। आफैलाई पर्याप्त समय दिन को लागी ऋणदाता को लागी आवश्यक परिश्रम आवश्यक पर्दछ। ऋणदाता आवश्यक ऋण सुरक्षा प्रक्रियाहरू बाईपासलाई मात्र बाकिनेछ किनभने तपाईं छिटो हुनुहुन्छ। तिनीहरूले रेखांकन छोड्नु हुँदैन किनभने तपाईं लेनदेन गुमाउनुहुनेछ यदि तिनीहरू यसलाई तपाईंको टाइमटाइबलमा निधि गर्दैन। तिनीहरूले सुरक्षा दिशानिर्देशहरू बाईपास गर्दैनन् किनकि तपाईंले पैसा गुमाउनु भएको छ जुन तपाईंले पैसा कमाउनु भएको छ, मूल्याङ्कन वा अन्य चीजहरू। तिनीहरूले ऋण कोषमा सन्तुष्ट हुँदा तिनीहरूले निधि गर्नेछन् र जब ऋणदाता सन्तुष्ट हुन्छ कि यो लेनदेन निधि गर्न सुरक्षित छ। त्यसैले, यो आवश्यकताको लागि अनुमति दिनको लागि पर्याप्त बन्द समय दिनुहोस्।
यहाँ एक सम्पत्तिको उदाहरण हो
बस हाम्रो ग्राहकहरु को एक को लागि वित्त पोषित थियो।
प्रस्ताव गरिएको थियो जहाँ
कर्पोरेट क्रेडिट पहिलो बंधकको लागि नगद प्रदान गर्दछ।
सम्पत्तिको विक्रेताले दोस्रो दोस्रो बंधक फिर्ता लिन्छ। (हामी तपाइँले हाम्रो प्रोग्राममा नामांकन गर्दा यस्ता प्रस्तावहरू कसरी गर्ने भनेर देखाउने नमूना अनुबंध प्रदान गर्न सक्दछौं।)
पहिलो बंधक ऋण खरीद मूल्य को 50% थियो। (मूल्यको 80% माथि सही परिस्थितिमा फ्याँकिएको हुन सक्छ र यदि ऋणदाताले महसुस गर्छ भन्ने अनुमान गर्दछ।)
विक्रेतालाई भुक्तानी गर्ने दोस्रो बंधक ऋण खरिद मूल्यको अन्य 50% थियो।
कर्पोरेट क्रेडिट क्लाइन्टले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्दोरहेछ कि उनको पैसाबाट पैसा कमाई सकेन
यहाँ एक रियल एस्टेट सम्झौताको उदाहरण हो जुन शायद
वित्त पोषण नगर्ने:
खरिद मूल्य $ 500,000
ग्राहकले उधारो लिन चाहन्छ
पुरा $ 500,000
ग्राहक पनि चाहन्छ
खरिद गर्न को लागी $ 150,000 उधार
त्यसो भए, ग्राहकले उधारो लिन चाहन्छ
$ 650,000 एक $ 500,000 खरिद मूल्यमा।
ग्राहक भन्छन् सम्पत्ति
"लायक" $ 1 मिलियन छ। सम्पत्ति $ 1 मिलियन को मूल्य मा हुन सक्छ। तर
मूल्याङ्कनहरू वास्तविक मूल्यहरूमा गरिन्छ र के मूल्यहरू "हुनु पर्छ" होइन। त्यसोभए, यस खरिदको साथ, अब हामीसँग छ
मार्केटमा $ 500,000 को तुलनात्मक रूपमा जसमा अन्य गुणहरू
क्षेत्र मूल्याङ्कन गरिनेछ। यद्यपि, हामी लगानीकर्ताको रूपमा यो बिन्दु तर्क गर्न सक्छौं
जब सम्म हामी अनुहारमा निलो हुन्छौं, उधारदायीहरू प्राय: ऋण आधारित हुन्छन्
कुन अनुमानित मूल्य वा भावी खरिद मूल्य हामी जुन सोच्दछ कि खरीद मूल्य हुनसक्छ वा होइन। होइन कि त्यहाँ अपवाद छैन
यस नियमलाई; तर यो नियमलाई अधिक मा ऋणदाता द्वारा पछ्याउने अपेक्षा राख्नुहोस्
उन्नत मान्यता - जब विज्ञापन विज्ञापन, ग्राहकको विश्वास बढ्दै गएको छ जब "हाम्रो कम्पनी अस्तित्वमा छ ..." यो साँचो महत्व हो जब तपाई वास्तव मा विशेष उद्योग मा व्यवसाय मा व्यस्त समय अवधि को लागी निर्दिष्ट समय अवधि को लागी व्यस्त हुनुहुन्छ सालको कम्पनी शेल्फमा भएको छ।
कर्पोरेट क्रेडिट - कहिलेकाहीं यो बैंक, आपूर्तिकर्ताहरू, लगानीकर्ताहरू र उद्यम पूंजीवादहरूसँग ठूलो स्थापना गर्न जबसियतमा यो सजिलो हुन सक्छ। यद्यपि यो अन्य, अधिक महत्त्वपूर्ण कारकहरू जस्तै कि कमजोरी र मुनाफाको बीच एक सानो कारक हो। भर्खरै भर्खरै प्राप्त व्यवसाय जस्तै, हामी भर्खर पूर्ण प्रकटीकरणको सिफारिस गर्दछौं जुन तपाईंले हालैको इकाई प्राप्त गर्नुभएको छ।
कम्पनीहरू समावेश गरिएको स्थापित कम्पनीहरूको सूची छ जुन तत्काल खरीदको लागि उपलब्ध छ। कम्पनीहरू पहिलो-आगतमा बेचेका छन्, पहिलो-सेवाको आधारमा। त्यहाँ निगमहरू उपलब्ध छन् जुन बैंक खाताहरू र क्रेडिट लाइनहरू स्थापित गरेका छन्। हामी यस्ता कम्पनीहरू उपलब्ध हुन सक्दछौं वा छैन। कम्पनीहरू कर वा कानूनी दायित्वबाट मुक्त छन्। एक अपवादले कैलिफोर्नियाका निगमहरू समावेश गर्दछ जसमा वार्षिक फ्रान्सेली शुल्क हो।
रियल स्टेट कोर्स प्रशिक्षकले ग्राहकहरूको बहुमत छ जुन हाम्रो सेवाको माध्यमबाट प्राप्त गरेका कम्पनीहरू प्रयोग गरेर एक वा धेरै अचल सम्पत्ति लेनदेनमा संलग्न हुन्छन्। कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो भाग शिक्षा हो। हामी एक निगम वा LLC प्रस्ताव गर्दैछौँ र रियल एस्टेट किन्न कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे प्रशिक्षण। हाम्रो कार्यक्रम अनूठा छ, हाम्रो ज्ञानमा, एक समान कार्यक्रम कुनै अन्य संगठन द्वारा प्रस्तावित छैन।
जब हामीले तपाईलाई निगम वा LLC र सम्बद्ध प्रशिक्षण र परामर्श प्रदान गर्दा हामी तपाईंको तर्फबाट खर्च गर्यौं। किनभने यी खर्चहरू हाम्रो द्वारा पुनःप्राप्ति योग्य छैन किनभने तिनीहरू अनावश्यक वस्तुहरू हुन्। केही ऋण अनुरोधहरू पूरा गर्न, ऋण तेस्रो पक्षहरूलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ। तेस्रो पक्षको माध्यमबाट ऋण पूरा भएको हुन सक्छ वा यस कम्पनीको माध्यमबाट खरिद गरिएको कम्पनीको प्रयोगलाई आवश्यक हुन सक्छ। हामी आफ्नो कार्यक्रम को दायरा भित्र हाम्रो क्षमता को सबै भन्दा राम्रो आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न कोसिस गर्ने प्रयास गर्नेछौं।
कम्पनीहरू समावेश गरी मेल फर्वार्डिंग, टेलिफोन नम्बर र फ्याक्स नम्बर सहित ठेगाना सहित एक राज्यमा आभासी कार्यालय र यूएस स्टेट र धेरै विदेशी अधिकार क्षेत्र प्रदान गर्न सक्छ। यो मान्छे जो व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहान्छ तर यसको लागि तिनीहरूको घरको ठेगाना प्रयोग गर्न चाहँदैनन्।
हामी तपाईंको निगम वा LLC को लागि अमेरिकी वा अफशोर बैंक खाता पनि स्थापित गर्न सक्छौं। तपाईंसँग तपाइँको खाताको साथ साथै डेबिट कार्डमा अनलाइन पहुँच हुनेछ। सानो रकमको लागि, तपाईंले डेबिट कार्डहरू खरिदका लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ। ठूला रकमका लागि, तपाईं बैंकको अनलाईन सेवा र तार को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ ती पैसाहरू जसबाट तपाईं खरिद गर्न चाहानुहुन्छ। कम्पनीहरू समावेश गरिएको बैंकलाई आवश्यक "योग्य परिचयकर्ता" पत्र प्रदान गर्दछ ताकि तपाईको खाता बिना तपाईंको उपस्थित हुन सक्छ। स्वाभाविक रूपमा, हामी पूर्ण कानूनी अनुपालन सिफारिस गर्दछौं र एक वकील र एक लेखाकार द्वारा कानूनी र कर सल्लाह।
कम्पनीहरूमा नियमित रूपमा प्रायोजक स्थानीय र अपतटीय बैंकिंग र निस्क्रिय क्षेत्र अधिकार समीक्षा र भ्रमण गरीएको छ। हामी विश्वव्यापि रूपमा बैंकिङसँग सम्बन्ध छौँ र दर्जा बनाउन सक्छ जुन तपाइँको व्यक्तिगत आवश्यकताहरू सजिलो हुन्छ। वास्तविक सम्पत्तिको मूल्य र रियल स्टेट उधार कार्यक्रमहरू चक्रमा स्वभाव हुन्। त्यसोभए ग्राहकको रूपमा तपाईंले बुझ्नुभयो र सहमत हुनुभयो कि हाम्रो कार्यक्रम बिना सूचना बिना परिवर्तन हुन सक्छ। हामी यो कार्यक्रम अन्तर्गत एक वर्षको लागि नियुक्तिमा सेवा प्रदान गर्छौं, आधारको रूपमा।
एक अर्डर गर्न Aged निगम or शेल्फ निगम (जसलाई पनि भनिन्छ शेर्पा कोर स्थापित भएको क्रेडिट or क्रेडिट संग शेल्फ कोर कार्यक्रम वा क्रेडिट लाइनहरु संग शेल्फ कोर or पनीक्स स्थापित संग निगमों निगम TM स्कोर)कृपया कल गर्नुहोस् 1-888-444-4412, या अन्तरराष्ट्रीय स्तर + 1-661-310-2688 मा र हाम्रो विशेषज्ञहरु संग एक कुरा बोलो जो खुशीपूर्वक तपाईंलाई सहायता गर्नेछ। कृपया सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान7को बीचमा कल गर्नुहोस्: 00 AM र 5: 00 PM PM Pacific Time।